Ngaba ungandibonisa iindawo eziphezulu ze-backlink ezili-10 ukufumana iinqununu ezihlawulwe ngokukhuselekileyo?
Ewe, ndinokukubonisa iindawo eziphezulu ze-backlink ezili-10 ukuthenga izixhumanisi eziphezulu kunye namathuba ambalwa wokuphakamisa ifulegi ebomvu ngeGoogle. Enyanisweni, inkqubo yendalo yokuqhagamshelana kwendalo iyabaluleke kakhulu. Ndiyathetha i-webmaster yengcali kunye nee-SEO zengcali zivezile kwakhona ukuba zonke izithuba zewebsite ziqhutyelwa ngokucwangciswa kwe-site ngokumalunga ne-10%. Ngexesha elifanayo, inkqubela phambili ekukhuthazweni kwe-intanethi kuxhomekeke kwiprofayili ephambili yekhonkco kwiwebhusayithi, ngokumalunga ne-backlinks kokubili ngokubhekiselele kumgangatho, kunye nobungakanani bawo. Yigcine nje engqondweni - yenza ngokulula, zonke ikhonkco ezinqamle kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi ngokwenene inikezela "enye ivoti" enokuqwalaselwa yiGoogle ngokwalo, kunye nezinye iinjongo ezinkulu zophando xa kuziwa ekunikezeni isikhundla esifanelekileyo kwindawo uluhlu lweSERP.
Qaphela ukuba ke, ukuba i-backlink zimelela njengendlela engcono kunye neyokuxhamla yokuphucula izikhundla ezikhoyo zendawo kwixesha elifutshane.Kodwa ngaphambi kokuba sikubonise iindawo eziphezulu ze-backlink ezili-10 ezixabisa ixesha lakho kunye nemizamo, masijongane nayo - ukuthenga izixhumanisi ngokufanelekileyo kwaye injongo enyanisekileyo yayiya kulungile. Nangona, konke oku kusemandleni kunokubonakalisa kube yingozi ngakumbi kunokuba uzuze umzamo. Yingakho ndicebisa ukuba ndisebenzise ngononophelo olukhethekileyo kwaye ndenze isheke kabini kwikhonkco nganye kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi ngaphambi kokuhamba. Kwaye akukho mfuneko yokuthi ihlawulwe idibanisa okanye ivela kwiivili ezinxibelelwano (i. e. , iiplani ze-intanethi kunye neendawo zokutshintshiselwa kwekhonkco kwinqanaba, kunye naliphi na iinkonzo ezincinci zokuvelisa izixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuzalisa iitoni ze-backlinks ezisezantsi, ngaphandle kweendlela ezithintekayo). Ngoko, khumbula ukuba kufuneka utyalomle ixesha elaneleyo lokuqhuba uphando olululo ngaphambi kokuba ufumane enye ikhonkco ehlawulwayo - nakwezo ndawo eziphezulu ze-backlink 10. Emva koko, ukukhawuleza ukuthenga izixhumanisi kwenye indawo kwi-intanethi mhlawumbi iyingozi kakhulu kwaye yingozi.
Iindawo eziphezulu ezi-10 ze-Backlink ezifanele ukuhlawula iziqhagamshelana
Ukulawulwa kwezixhumanisi - yindawo yokuqala ndikucebisa ukuba u tyelele. Kungenxa yokuba ndasebenzisa iinkonzo zabo zokwakha i-backlink kwiwebhusayithi yam niche kwaye ndafumana phantse yonke into elula, ethembekileyo, kwaye iphephile. Ukulawula izixhumanisi akunakubuyisa ibhidi, ngoko unokuhlala uthenga i-backlink efanelekileyo ye-PageRank ngemali efanelekileyo. Ngaphandle koko, intengo ephantsi apha iqala nge dollar enye.
I-Post Links - umthombo wesibini ofunyenweyo kum uluhlu lwamasayithi angama-backlink angaphezulu kwe-10 okwenza ukhuseleko olukhuselekileyo. Phakathi kwamacala amanqabileyo kweli qonga, unokukwazi ukujoyina ngokulula ukuhlawula imali engama-$ 49. I-Post Links zibonise indlela ethembekileyo yokuthintana ngokukhawuleza nabavakalisi abalungileyo. Kwaye kukho abaninzi abathengisi apho bafuna iindawo ezifanelekileyo zokuthenga izinto eziphezulu ze-backlinks. Qaphela, ukuba ukuba iwebhusayithi yakho okanye iblogi ilungile ngokwaneleyo, usenokuba ngumtshicili. Emva kokuba unomxholo omtsha, umgangatho, kunye nokujoliswe kakuhle, konke okufunekayo ukuba ungenise indawo yakho. Ngaloo ndlela, ubandakanyeka ekwakheni i-backlink yangempela kubathengi bamanani ukwenza imali. Emva kwakho konke, konke malunga nezoshishino, akunjalo?
I-backlinks dot dot - yindawo yesithathu ethandwa kakhulu ukucinga ngokuthenga i-backlinks kunye. Into ekhethekileyo yale ncedo kukuba inokukunika uluhlu olubanzi olubanzi lwezibonelelo ezitholakalayo kwiindawo ze-PR ezinamandla kunye negunya eliphezulu le-domain, kunye nenani elikhulu lewebhu okanye ezinye iiblogi ezifanele ukuhlawula ii-backlinks ze-HQ kakuhle. Ingakumbi - i-Backlinks dot dot COM indawo enkulu kunye nesebenzisiweyo yokubamba ezinye iinqununu ezibalulekileyo kunye nokuphakamisa amanqanaba akho okwangoku. Ngaphandle koko, ukuba waziwa phakathi kwababoneleli bekhonkco abaqashiweyo ngokugqithiseleyo mhlawumbi nayiphi na iwebhusayithi ye-niche, unokuyonwabela mhlawumbi inkqubo elula yokuthenga phakathi kweendawo ezili-10 ezisemva kwe-backlink - uzive ukhululekile ukwenza intlawulo ephumelelayo kunye nekhadi lesikweletu, okanye usebenzisa nje i-akhawunti yakho ye-PayPal yakho.
I-Black Hat Links-yi-Hat-Black Hat ye-SEO ithuluzi elinokukunceda malunga naluphi na unxibelelwano oludingayo - nge-PR ephakamileyo, iWebhu 2. 0 efumanekayo, ubudala besigxina, kunye negunya, kunye nempawu ezininzi zeentlalo, kunye nokunye. Njengoko usenokuba uqikelele, i-Black Hat Links ngumthengi onobungozi othengisa i-backlink kwiiphakheji ezininzi kwiinqwelo ezinzima kakhulu kunokuba anikezele kuphela enye okanye iibhanki ezihlawulwayo kunye nabaninzi be-webmasters abanononophelo kunye nabanikazi bezentengiso kwi-intanethi.Phakathi kwezinye izinto eziyingqayizivele, esi sixhobo sinokunika nantoni na malunga ne-backlinks okanye i-backlink ikhulu-ukunikela iziphumo ezinokulinganiswa ngokukhululeka nokuzenza zonke zibonwe nje ngeyure okanye. Ngaphantsi - zama le sixhobo kuphela xa unesakhono kwi-SEO kwaye uzive ukhaliphe ngokwaneleyo ukuba uthathe ingozi ekubhekiselele ekusebenziseni i-Black Hat Hat ne-SEO kunye nezinye ezingekho "i-legal" tricks and schemes schemes.
I-Hoth - esinye isixhobo esihle sokwakha i-backlink ngesandla. Kakade, i-Hoth ayiyikukhethwa ngokugqibeleleyo kwinqanaba le-backlink ezili-10. Kodwa kuncedo kakhulu ekulawuleni ikhonkco, kunye nokufumana ikhankanya ngentloko nge-Google indexing. Zama le software kwaye uphucule ukusebenza kwewebhusayithi yakho kwinqanaba. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ngaphambi kokuhamba phambili, qiniseka ukuba kukho konke okukhoyo. Ndiyincoma ngokukhawuleza ukuba uzigcine kude naziphi na izenzo ezinkulu zokuthengwa, ubuncinci uphinde uhlolisise yonke ikhonkco ngaphambi kokuhamba. Le nto yinto efana neyingozi kakhulu yokudibanisa isofthiwe sokwakha, esi sixhobo sobungqina singabonakalisa ngokukodwa kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi. Ukuthintela esi siphelo esibi, ndincoma ukuba usebenze ngokucophelela njengoko unako, ngokukodwa ekuqaleni. Kwakhona-ukukhawuleza ukutshatyalalisa ezininzi ezintle ezibonakalayo ezintle njenge-backlinks ngokunokwenzeka, akunakwenzeka ukuba wenze into. Kodwa yintoni efunekayo yenziwe ngcono? Into kukuba konke okufunayo apha kukuphephe ukuyenza ngesibindi, ngaphandle kokuba ufuna ukukhangela inkxalabo kwiimbono eziphambili zeenjini. Akukho mntu ufuna ukuhlawulwa nguGoogle, kunene? Ngoko ke, qhubeka usebenza ngokuqhubekayo ukuze uhambe ngokuthe gqolo - emva kokuba uqaphele ukuba inxalenye yegama lakho eliphambili lifumana inkqubela phambili entle kakhulu ehamba phambili phezulu kwe-SERP, unokugqiba uqale ukuthenga amanqaku amaninzi kunye nokuthe ngqo umgomo wakho wokugqibela kunye nokubeka iliso ngokuqhubekayo imeko yakho yangoku kunye nezixhobo zokuhlaziya i-backlink.
I-Fiverr - esinye isixhobo esidumileyo sokubonelela ngeenkonzo zokuqhagamshelana nekhonkco kwishedyuli ngokuzenzekelayo. Gcinani engqondweni, ukuba njengawe nawuphi na esinye isixhobo esinokwenza isixhumanisi, i-Fiverr ingaba yindawo eyingozi - ngoko jonga! Musa nje ukugqithisa ngobuninzi xa ufaka iikhonkco ezintsha zokuhlawula, kwaye wenze isheke ephindwe kabini ukujongana nabantu abanolwazi kunye nabantu abanethemba kakhulu ngaphandle.
Ephakamileyo Umsebenzi - yindawo ekugqibeleni ekhuselekileyo efunyenwe phakathi kwoluhlu lweendawo eziphezulu ze-backlink. Kodwa ukhuseleko liya kuhlala libiza imali ekhethiweyo, kunjalo? Ndiyathetha ukuba i-Up Work ijongene ikakhulu nabantu abanezakhono ezizimeleyo. Ewe, iithegi zabo zamanani ngamanye amaxesha ziba zizintlu, kodwa inkonzo isekho phakathi kwezona zinto zifanelekileyo ukuba zenze idibaniselwano kunye nee-backlink. Ukwenza njalo, uya kuhlala uyazi ubuncinane oko uhlawulayo.
Abantu Ngeeyure - ligama elibini elona lihle kwihlabathi lokuzimela. Phakathi kwezinto zalo eziphezulu, uluntu lwentlalo ye-freelancing lunokunika ii-backlinks eziphezulu ze-PR ngokulandela bonke abakulungele ukuhlawula. Ukuqwalasela iziphumo ezilindelwe kuzo zonke ezo ndawo ezingaphezulu kwe-backlink (i. e. , ukunyusa okwenziweyo kwizikhundla zokukhangela kwiwebhsayithi enye okanye iblogi), Abantu ngeyure benza umsebenzi ekugqibeleni kunabo bonke abantu kwiWebhu. Ngoba? Kungenxa yokuba le ndawo yokuziqhubela phambili izakhono zokubonelela ngoncedo olunamandla kunamhlanje, ndimele ndivume. Kukho amawaka e-freelancers ehlakaniphile ekhupha ngaphandle apho ukukunika i-backlink ephezulu ye-PR kunye ne-Follow Follow evela kwimithombo emininzi eyahlukeneyo enegunya eliphezulu kunye ne-PageRank, njenge-HuffPost, IBM, iWebhu elandelayo, kunye namanye amagama iinqununu zehlabathi ziyaziwa ngabantu abaninzi.
Thenga ii-Backlinks dot dot ID - yaziwa ngokuba yindawo efanelekileyo yokujonga iwebhusayithi yakho okanye ukunyuka kwebhulogi kwi-Google SERPs - njenge-rocket. Iqela labo le-top-notch ye-SEO kunye ne-webmasters edlala ngaphezu kweminyaka eyi-15 kwi-shishini inokubonelela ngenjongo yokukhuthaza ukuphakanyiswa kohlobo kunye ne-Follow Backlinks ezithengiswa ngobuninzi.
I-Backlinks Rocket - ayikho kuphela kwiindawo ezingaphezulu kwe-backlink ezili-10 kodwa umboneleli we-SEO we-international scale. Ukunikezela ngokungafaniyo kweephakheji ezihlawulwe ukususela kwi-$ 59 ukuya kwii-dollar ezilikhulu, i-Backlinks Rocket inokukunceda nge-discounts edityaniswa ne-EDU i-backlinks ezithengiswayo. Abanye abantu bakholelwa ukuba unxibelelwano olulodwa lwezemfundo lungcono kunama-100 avamile.
Ikhonkco ye-Wheel Pro - yindlela ekhethiweyo ekhethiweyo, engafanelekiyo kwiluhlu lwam phezulu. Ngokuqinisekileyo, loo ndawo inokuba yingozi njengoko ibonisa ukufumana inani elikhulu le-backlinks ngokusekelwe ikakhulu ekuxhasaneni kunye nezinye izinto ezingathembekanga ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukubonelela ngeyona nto ibaluleke kakhulu nakwi-backlink eorhulumente, i-Link Wheel Pro ibonakala ilungele ukudlala, akunjalo? Emva koko, umdlalo omkhulu usoloko uthetha ukuthatha ingozi enkulu. Nangona kunjalo, kusekho kuphela kuwe ukugqiba Source .